Rahoviana no hisy ny AirPods 2 vaovao? | Avy amin'ny mac aho
Nahavita ny andro tamin'ny taona izahay tamin'ny fisaintsainana ireo drafitra kasain'i Apple hotanterahina ho an'ny AirPods faharoa. Araka ny efa fantatrao, miaraka amin'ny fahatongavan'ny teknolojia tsy misy tariby amin'ny iPhone 8, 8 Plus ary X vaovao tamin'ny volana septambra lasa teo, Mijoro ho vavolombelona ny amin'izay kasain'ny Apple hampiharina amin'ny vokatra marobe izy mandritra ny taona maro.
Ary izany indrindra no hitantsika tamin'io fampisehoana io ihany nefa tsy mila milaza na inona na inona i Apple. Tamin'ny fampisehoana ny iPhone X vaovao dia naneho vokatra vaovao antsoina hoe AirPower i Apple izay ahafahany mamerina indray miaraka vokatra telo an'ny orinasa, ny Apple Watch, ny AirPods ary ny iPhone.
Ny tobin'ny AirPower dia tsy ny base famahanana tariby fotsiny fa ny habeny dia lava kokoa ahafahana mametraka fitaovana hatramin'ny telo ary ampandoavinao vola miaraka aminy. Araka ny voalazan'ny Apple ihany, ny base dia hanana puce iray ahafahantsika mahafantatra izay fitaovana napetraka ary afaka mamoaka ny hery ilaina. Ary eo no misy ny tianay hampatsiahivana anao amin'ity lahatsoratra ity.
Ho an'ireo AirPods dia azo averina simba amin'izany fomba izany, Apple dia tokony hamidy tranga vaovao izay azo averina indray amin'ny alàlan'ny fampidirana, zavatra mbola tsy nitranga mandraka androany. Inona no andrasan'ny vahoaka Cupertino? Hamoaka miaraka amin'ny base AirPower ve ny tranga vaovao? Ho tonga amin'ny volana febrily ve ny toby vaovao?
Betsaka ny tsaho milaza fa eo anelanelan'ny faran'ny volana febroary sy ny fiandohan'ny volana martsa dia afaka manatrika ny fampisehoana ireo vokatra Apple vaovao isika, ao anatin'izany ny mety ho tranga fiampangana vaovao ho an'ny AirPods. Araka ny efa fantatrao, ny zoma lasa teo dia efa namidy ny HomePod tany amin'ireo firenena voalohany, ka izao ny olona rehetra dia mifantoka amin'ny zavatra mbola havoaka na dia efa hita tamin'ny fampisehoana aza izy ireo ary izany dia ny base AirPower ary ny tranga tsy misy tariby ho an'ny AirPods.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Rahoviana no hisy ny AirPods 2 vaovao?
Efa mandray ry zareo !!
Mihevitra ve izy ireo fa hanatsara ny kalitaon'ny feo? Te hividy azy ireo aho fa miandry aho sao hivoaka ilay kinova faharoa